Ụlọ ahụ dị na Wallwood, Led Wall Pack 400W
Nkọwa:Ime Ụlọ Mgba,Led Wallpacks,Led Wall Pack 400W dịka,Led Wall Pack Light,,
Home > Ngwaahịa > Mgbidi Mgbidi > Ime Ụlọ Mgba
Ngwaahịa nke Ime Ụlọ Mgba , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ime Ụlọ Mgba , Led Wallpacks suppliers / factory, wholesale high-quality products of Led Wall Pack 400W dịka R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
35W N'èzí Led Wall Pack Na Photocell  Kpọtụrụ ugbu a
55W Egwuregwu Kwesịrị Ekwesị N'ugwurugwu Egwurugwu  Kpọtụrụ ugbu a
80W Industrial Led Wall Pack Lights 5000K  Kpọtụrụ ugbu a
100W N'èzí Led Wall Pack Light Fitting  Kpọtụrụ ugbu a
100W Ngwá Ngwá Ngwá Agha Dị N'èzí  Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụahịa otu: USD 29.5 - 30 / Piece/Pieces
Bbier 35W Led Wall Pack Na Photocell nwere ike belata 80% ọkụ eletrik. Nke a n'èzí nke a na-eme ka ọ bụrụ nke zuru oke maka ọkọlọtọ 100W ahịa / ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọkụkụ dị iche iche, dị ka azụmahịa, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ngwa ụlọ. Anyị 35w Led...
Ọnụahịa otu: USD 32.8 - 33.5 / Piece/Pieces
Mgbidi Nkume a na-enye ìhè 55W na-enye ụcha agba ọcha nke 5000k na 7150 lumens nke mmepụta, na-anọchi ntanye 200W HPS / MH. Nke a 55W Ejiri Wall Light dị mma maka nbata azụmahịa, nchebe nchebe na ngwa ngwa ọkụ ọkụ, na mgbakwunye. Mgbidi anyị Led...
Ọnụahịa otu: USD 43 - 43.5 / Piece/Pieces
Bbier 80W Wall Pack ọkụ bụ nke na-egbuke egbuke aluminum, nke na-akụda na-eguzogide eguzogide, oke okpomọkụ ana-anwale ma nwee ike ijikwa ọnọdụ ihu igwe niile. Nke a na-eme ka anyị na- arụ ọrụ Wall Wall nke zuru oke na-eme ka ihe nkedo ọkụ maka ụlọ...
Ọnụahịa otu: USD 52.5 - 53 / Piece/Pieces
Bbier Led Wall Pack Light 100W nwere ụlọ ahịa na-adịgide adịgide nke ụlọ aluminom, ụlọ ọgwụ ndị na-eme ka a ghara ịbanye na ya ma ghara ịchọta ihe eji eme ballast (enweghị buzzing). Nke a bụ Wall Light Fitting 100W bụ 130 00 LM, 5000K na 120-277V....
Ọnụahịa otu: USD 46.5 - 47 / Piece/Pieces
Bbier's Led Wall Pack 100W nwere ike belata 80% nke ọkụ eletriki na 100w External Led Wall Pack Light Fitting zuru oke maka ntule nke 400W ahia / ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ntọala dịgasị iche iche, dịka azụmahịa, ụlọ ọrụ mmepụta ihe yana ngwa obibi....
China Ime Ụlọ Mgba Ngwa
Anyị Mere Wall ọkụ Indoor dị ukwuu edochi anya n'èzí, na-atụ otutu Metal Halide ma ọ bụ sodium Potassium bulbs. Led Wall Pack Light ga-eji dochie ebe ọ bụla site na 150W HPS / MH ma nye nkwado zuru oke n'ọtụtụ ngwa. Tụkwasị na nke ahụ, Led Wallpacks dị mfe iji wụnye ma nye ngwaọrụ dị mma dị ka "Nkwụsị Mmalite." Ọzọkwa, ndị a Led Wall Pack 400W na- enye ìhè kachasị elu na-enweghị Flickering ma ọ bụ na-eme mkpatụ.
Okpokoro Ime Mgbidi Anyị Dị N'ụlọ bụ Eco-enyi na enyi nke pụtara na ọ dịghị Mercury. Site na ọkụ ọkụ a, ọ dịghị UV ma ọ bụ IR nọ na ọkụ. Ọzọkwa, ihe ndị a LED Wall Pack Fitit s Bịa na afọ 5 nke ikike. Ngwa: Ntinye ọkụ, ọkụ ọkụ ụlọ, ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ, ogige, ogige, ebe obibi, ebe mgbidi, wdg.
Ime Ụlọ Mgba Led Wallpacks Led Wall Pack 400W dịka Led Wall Pack Light Ụzọ Ugbo Ala